किन रिसाए लियोनेल मेस्सी ? | NepalDut
किन रिसाए लियोनेल मेस्सी ?
टोलीले गरेको शृङ्खलाबद्ध गल्तीको फाइदा उठाउँदै एथ्लेटिको म्याड्रिडले बार्सिलोनालाई हराएर स्पेनिस सुपरकपको फाइनलमा स्थान बनाएपछि स्टार खेलाडी लियोनेल मेस्सी रुष्ट बनेका छन् ।
साउदी अरबमा नयाँ फर्म्याटमा खेलाइएको पहिलो संस्करणमा बार्सिलोना दोस्रो हाफको शुरुवातमा नै कोकेको गोलमा पछि परेको थियो ।
तर, मेस्सी र एन्टोनी ग्रिजमानले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई खेलमा पुनरागमन गराएका थिए । यसबीच बार्सिलोनाको दुई गोललाई भिडियो एसिस्टेन्ट रेफ्रीले उल्टाएको थियो ।
यद्यपि, बार्सिलोनको खुसी धेरै लामो टिक्न सकेन । खेलको अन्त्यतिर टोली सम्हालिन नसक्दा अल्भारो मोराटाले खेलको ८१ औँ मिनेटमा पेनाल्टीबाट गोल गर्दै खेल बराबरी गरे । त्यसपछि एथ्लेटिकोले पाउनुपर्ने अर्को पेनाल्टी पनि पाएन ।
अन्ततः एन्जल कोरेयाले खेल सकिन चार मिनेट अघि निर्णायक गोल गर्दै एथ्लेटिकोलाई ३–२ को जीत दिलाए ।
अब एथ्लेटिकोले आइतबार फाइनलमा रियल म्याड्रिडको सामना गर्नेछ । रियलले बुधबार राति भ्यालेन्सियालाई पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो ।
टोलीको हारपछि कप्तान मेस्सी क्रुद्ध देखिएका थिए । खेलपछि उनले भने, ‘यो निक्कै लज्जास्पद हो । हामीले उत्कृष्ट खेल खेल्यौँ, धेरै लामो समयपछि हामीलाई मज्जा आइरहेको थियो, हामीले खेलमा नियन्त्रण गरेका थियौँ, खेलमा दबदबा बनायौँ, आक्रमक खेल खेल्यौँ ।’
‘खेल सकिन १० मिनेट मात्र बाँकी छँदा एथ्लेटिको लगभग ‘मृत्त’ भइसकेको थियो । तर, हामीले केही गल्ती गर्यो जसले एथ्लेटिकोलाई हामीले जित्नुपर्ने खेलमा फर्किने मौका दियो ।’
उनले थपे, ‘यसले पीडा हुन्छ किनभने यो उपाधि हो । हामी फाइनलमा पुगेर जित्न चाहन्थ्यौँ ।’
पराजयसँगै म्यानेजर अर्नेस्टो भालभर्डे थप दबाबमा परेका छन् । बार्सिलोनाले कमजोर प्रदर्शन गर्दा उनी प्रशंसकहरुको आलोचनाको तारो बनिरहेका छन् ।